दीपकले गिजोलेको ‘छक्का पन्जा २’ - Filmyfanda : Always Exclusive Entertainment News Portal SiteFilmyFanda
दीपकले गिजोलेको ‘छक्का पन्जा २’
फिल्मी फण्डा । ८४ व्यञ्जनसहितको स्वादिष्ट खानालाई गिजोल्यो भने के होला ? खाना वेस्वादको हुन्छ, अर्को खाना स्वास्थ्यको लागि पनि हितकर नहुन सक्छ । नेपाली रजतपटका ब्लकबस्टर निर्माता हुन् दीपकराज गिरी । उनले फिल्म ‘छक्का पन्जा २’ लाई गिजोले । हलमा सफलता पाएर उत्रेको फिल्मलाई दर्शकले यूट्युबमा प्रतिक्षा गरेका थिए ।
उनलाई सार्वजनिक समारोह होस् वा सामाजिक सञ्जालमा होस् सर्वाधिक सोधिने प्रश्न थियो ‘छक्का पन्जा २’ यूट्युबमा कहिले आउँछ ? यूट्युबमा प्रतिक्षा गरिएको फिल्मलाई उनले नयाँ प्रायोग भन्दै यसै वर्षको सुरुवातमा हलमा लगाए । फिल्मबाट उठेको रकमको केही हिस्सा सामाजिक कार्यमा लगाउने घोषणा पनि गरे । तर दीपकले गालि खाए । हलमा पुनः लगानउनुको अर्थ नभएको भन्दै आलोचना गरियो । उनको यो प्रयोग ‘अर्थ न वर्था गोविन्द गाई’ भनेजस्तै भयो । उनको कार्यलाई अनेकन टिप्पणी गरियो ।
लामो समयको प्रतिक्षा पछी धेरैले युट्युबमा प्रतीक्षा गरेको फिल्म ‘छक्का पन्जा २’ यूट्युबमा सार्वजनिक गरिएको छ । युट्युबमा सार्वजनिक फिल्मले प्रतिक्रिया भने नराम्रो पाएको छ । दिपक दिपाको ‘छ माया छपक्कै’ प्रदर्शन मिति नजिकिदै गर्दा केही साल अघि सार्बजनिक प्रदर्शनमा आएको यो फिल्मलाई यूट्युबमा सार्वजनिक गरिएको हो । सार्वजनिक पश्चात् यूट्युबमा प्रतिक्रिया पनि आएका छन्, तर धेरै प्रतिक्रिया फिल्म नराम्रो लागेको संगै गालि आईरहेको छ । कतिपयले फिल्मलाई २–३ ओटा तितोसत्य जोडेर बनाएको भनेर आलोचना गरेका छन् ।
केहीले ‘छक्का पन्जा २’ युट्युबमा नहालेको रिसले प्रदर्शन हुन लागेको फिल्म ‘छ माया छपक्कै’ हेर्न दर्शक हलसम्म जाँदैनन् भनेर दिपकले यो फिल्मलाई यूट्युबमा हालेछन्’ भनेर व्यंग्य कसेका छन् । यता फिल्मको भ्युज भने ४२ लाख ६२ हजार हाराहारीमा पुगेको छ भने ट्रेण्डिङ्गक एकमा रहेको छ ।
हलमा ब्लकबस्टर बनेको छक्का पन्जा सिरिजको तेस्रो भाग पनि हलमा प्रदर्शन भैसकेको छ । तर बल्ल बल्ल २ बर्षको अन्तरमा यूट्युबमा कुर्ने दर्शकको गाली खाई खाई छक्का पन्जा २ सार्वजनिक गरेको छ । उता छक्का पन्जा ३ कहिले सार्वजनिक हुन्छ, कुनै टुङ्गो छैन । यूट्युबमा छक्का पन्जाको तेस्रो सिरिजको माग पनि भइरहेको छ ।
दीपक नयाँ विषयमा निर्णय लिन आफ्नो टिमसँग कुराकानी गर्नुपर्ने भने प्रतिक्रिया दिन्छन् । आफ्नो टिमसँग छलफल गरे पनि निर्णय भने दीपक आँफैले गर्छन् । दीपकले गिजोलेको फिल्म भएर नै होला सायद फिल्ममले नकरात्मक प्रतिक्रिया पाएको ।